Heshiis horu-dhac ah oo laga gaaray colaadii Dhumey – Radio Daljir
Heshiis horu-dhac ah oo laga gaaray colaadii Dhumey
Noofember 9, 2018 11:01 b 0
Ergadii ka kala timid gobolada Mudug ,Nugaal , Sool, Cayn ,iyo dowladd deegaanka Itoobiya ayaa waxa ay heshiis hor udhac ah ay kala dhax dhigeen beelihii dhawaan ku dagaalamay deegaanka Dhumey ee gobolka Sool.
Ergadan ayaa waxa hogaaminaya Garaad Kulmiye Garaad Maxamed Garaad Dool garaad Wiil Waal.
Qodabadii heshiska hor udhaca ahaa ayaa waxaa kamid ahaa:
1-1-In Xabadda la Joojjiyo si shuruud ah.
2-In labada beelood ay Nabadda qaataaan
3-In gogosha xigta ee Nabadeynta la dhigo magaalada Jig Jiga ee caasimadda dowlad degaanka Soomaalida Ethiopia.
5-In labada beelood ay iska soo xulaan min 21 Xubnood oo ergo ah.
6-Iyo in ay ku soo diyaar-garooban mudda saddex cisho ah.
Diiwaanka warka radio Daljir.com
Itoobiya Airlines oo mudo 41 Sanno Kadib duulimaadkeeda ka bilaabaysa Muqdisho (Sawiro)